Tsvaga izvo zvekuita uye zvekuita mune iri kuuya coronavirus kukiya: Martin Vrijland
Amsterdam meya Femke Halsema akatosara nezuro zano kuti kuzarirwa kwakazara kweAmsterdam hakuzoshamisi. On 18 March De Telegraaf yakataura kuti mapurisa ari kutogadzirira kuvharika kwakazara. Chirevo muTelegraaf ye husiku hwapfuura kuti denda reFuru rakadzoka zvakare zvinoita sekutaura kuti dambudziko ratova kaviri, nekuti nekoronavirus inoita kunge ichipararira muBrabant uye zvakare nedenda rekupisa, Rutte achange aine alibi yekusarudza kuvhara kwakazara.
Zvinorevei izvo mumatare ekongiri? Izvi zvinoreva kuti haubvumidzwe kubva mumba mako, macheki ari chero kupi uye iwe unosungwa kana uine kusahadzika kana chiratidzo chinoratidza chekuti unokwanisa kunge uine hutachiona kana kuti hausi kutevera mirau (mirairo). Ini ndakatsanangura zvazvinoreva zvakadzama pano.
Ndokumbira uparadzire mameseji akadaro izvi kuburikidza neBloomberg, avo vanotaura kuti 99% yevanhu vane hutachiona muItaly vange vaine zvimwewo kurwara uye kuti piritsi rekushandisa remushonga riri kupihwa rinotaura kuti zvinogona kukonzera matambudziko emwoyo nekuda kwekuwedzera kwemasero matsvuku eropa, uri panjodzi yekusungwa. KuSouth Africa vakatotanga kuunza mutemo uyu uye unogona kuenda kujeri kwemwedzi mitanhatu kana ukagovera meseji dzinopesana nehurukuro yepamutemo. Kodzero dzese dzinotorwa kubva pane izvi.
Kana izvi zvikaitika kwauri muNetherlands, iwe uchazofanirawo kunwa mushonga wekumanikidza. Mitemo yakatopfuudzwa muNetherlands. Mutemo iwo wakatanga kushanda musi wa1 Ndira 2020: mutemo wekumanikidza weGGZ. Ukasashandira pamwe, unofanirwa kuenda kuchitokisi chega kusvika wamedza mapiritsi. Iwe unofanirwawo kugamuchira syringe mumuviri wako, nekuti izvo zvinotaurwa mumutemo.
Izwi rekuti 'kuzarirwa kwakazara' hachisi chinhu kana rakaderera pane 'marita mutemo', inozivikanwawo se 'mamiriro enjodzi'. Isu tinobva takakomberedzwa kubva kumauto edu uye mauto emapurisa nevasori. Mumakore achangodarika ivo vakadzidziswa kuti vasatarisa kune vanhu, asi kungoita mabasa. "Befehl ist befehl!"
Isu tinofungidzira kuti taigara tine kuperevedza kukuru kwebhuruu mumugwagwa. Yunifomu yeblue kubvira yakatsiviwa neyunifomu yemauto-nechitarisiko chine hutsinye, bat, pepper yekupepeta, tasers uye zvechokwadi pfuti inozivikanwa. Inguva yakareba sei iyo isati iyo nhamba huru yevasimbisimbi zvakare kugamuchira pfuti? Pakutanga Ini ndakafanotaura kuti uto ringave richamiswa uye pane mukana wakanaka kuti ichi zvakare chikonzero chekuti mauto eAmerica asvika muVlissingen svondo rapfuura. Ivo vangangobatsira munyika dzinoverengeka dzeEU.
Zvese zvandafungidzira kusvika ikozvino zvaitika. Saka hauchakwanise kundinyora semufungo wepfungwa kana wekufungidzira. The reverse ndiyo nyaya. Chero munhu aifunga kuti ndiri mutengesi anofunga zvino ave kumba uye achiona zvandakanga ndafungidzira chaizvo. Unogona kuverenga zvinyorwa kubva kumavhiki mashoma apfuura.
Ini ndakakwanisa kuita izvi zvekufungidzira nekuti ini ndinoona kuburikidza neya master script. Ini ndakatsanangura iyo master script mubhuku rangu. Kune wese munhu akaverenga bhuku iro ini ndinaro zvimwe zvinowedzera zvakanyorwa. Izvo zvakakosha kuti iwe unzwisise iyo tenzi script uye kuti unonyatso kuverenga iro bhuku kubva pabutiro kusvika pabutiro. Mubhuku iro, iro randakaburitsa gore rapfuura, ndakafanotaura kuti kuchave neimwe denda rekupusha nekudzivirira kwekudzivirira pasi rese.
In the Chinyorwa chaMarch 18 Ini ndakatsanangurawo nzira yekubuda kweiyi coronavirus chipfupi kudanho rekutonga kwemakominisiti. Musi waNovember 25, 2019, ini ndakarondedzera nzira iyo capitalism neye demus demus zvagara zviri gadziriro yeCommunism iyi. Izvo zvakakoshawo kubaya pane iyo link uye kuverenga icho chinyorwa.
Kana iwe parizvino uchifunga kuti zvinhu zvave kuita uye kuti demokrasi ichadzoka mumavhiki mashoma uye iwe uchave uine rusununguko rwako rwese kumashure, ndinoda kukuyeuchidza kuti isu zvakare takave nedambudziko remamiriro ekunze. Mushure mezvose, taifanira kubvisa CO2 mumhepo nekukurumidza kuti tirege kufa mukati memakore gumi nemaviri. Kana tangojaira kutyaira nekubhururuka mumwedzi mishoma 'yenguva, panogona kunge paine chirevo chinoratidza kuti zvakanakisa sei nhanho idzo dzekuyerwa CO12 mazinga uye isu tava neyezve alibi yekuchengetedza mamiriro enhamo .
Chaos iri kuuya uye Telegraaf yakazivisa mune iyi yambotaurwa March 18 (nezve mapurisa ari kugadzirira kuvharika) kuti vanhu vanotarisirwa kurasikirwa nekunzwisisa kwavo uye kutsungirira pane imwe nguva. Ipapo ivo vagadzirira kuita nemaoko akaoma. Iyo 'ruoko rwakasimba'.
Zvinofungidzirwa kuti vanhu vachatya, nekuti havasi vese vane chikafu chakakwana uye mari icharambidzwa. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kubhadhara nepini (kana iwe uchinge watopfuura nemitsetse mirefu yezvitoro zvikuru) uye vamwe vashandi nevanozvishandira vanozosara vasina mari nekuti iyo yakavimbiswa yenyika rubatsiro inotora mavhiki akati wandei kwemwedzi nekuda kwemahara. .
Iwe unorangarira nyonganyonga dzichangobva kuitika kuhofisi yemutero? Izvo zvakatamba mukati Chikunguru 2019 zvakadaro. Saka kana nyika ikangoerekana yatora marudzi ese ematanho matsva uye ichifanira kumisikidza hurongwa hutsva hwekutaurisa kuti hupe vanhu mari yekutanga, unogona here kutarisira kuti izvi zvese zvichafamba zvakanaka izvozvi? Kwete, hongu kwete. Izvo zvese zvinova zvakanyanya kuomesa maitiro. Uye vanhu pavanopera mari, vanopera chikafu. Unogona kufungidzira zvichaitwa nevanhu vane nzara.
Mubvunzo urizobvunzwa nevakawanda munguva pfupi iri kutevera ndewekuti: "Hutachiona hwe corona chaihwo hwaive nengozi zvekuti hwaikosha zvese izvi here?"
Mibvunzo mikuru yakawanda inotarisana nayo ndeiyi: Chii chandingaite? Ndingaite sei nematanho ese akaomarara? Ndingapindura sei kana ndikawirirana nechimwe chinhu?
Ini ndinogona chete kupindura zvizere mibvunzo iyo kana iwe wakaverenga bhuku rangu. Chinhu chimwe chete chakajeka: iwe une kodzero yekusununguka kuzere rusununguko!
Iyo itsva tekinoroji komisheni nyika, iri kupararira pamusoro pako pasi peshoko re "coronavirus kuvharika", ichaedza kubvisa kodzero idzi dzose kana usingaite izvo zvainoda. Izvi zvinoreva kuti iwe unenge wakasungwa kana ukasashandira pamwe. Handikwanisi kuchiita chakanakisa kupfuura zvazvakaita. Ndapedza makore manomwe ehupenyu hwangu kuyambira vanhu vechiDutch uye ndakarasikirwa nechero zvese (nekuda kwepamhepo smear kampeni). Ndakaziva kuti izvi zvaizouya nekuedza kunyevera. Asi pane tariro! Kune tariro yakasimba kwazvo!
Muchikamu chinotevera chechinyorwa chino, ini ndichatsanangura tariro iyoyo uye ndinonyatsotsanangudza chaizvo zvaungaite. Ini ndinogona chete kupa rondedzero iyi kune chero munhu akatoverenga bhuku iri, nekuti pasina izvo zvakakosha kunzwisisa haugone kunzwisisa zvandiri kunyora. Iwe unofanirwa kutanga waziva izvo master script uye unofanira kutanga wanzwisisa musimboti wezviri kuitika. Saka verenga kutanga bhuku racho wobva waverenga zvasara zverunyaya urwu.
Cherechedza: Chingave chinyorwa changu chekupedzisira, nekuti ndabva kuNetherlands kwemakore mashoma ikozvino uye ndiri mune imwe nyika iyo iyo yakazara lockdown yatove kushanda uye ini ndinogona kusungwa chero nguva. Saka kana iwe usisiri kuona chero zvinyorwa zvitsva zvirikuonekwa pane ino webhusaiti, iwe unoziva iyi ndiyo nyaya.
Chinhu chezviziviso zveboshwe: parool.nl, telegraaf.nl, telegraaf.nl, nomorefakenews.com, nos.nl
Reader martinvrijland.nl inoratidzika kuita yakakura chiitiko chiitiko panguva yeiyo corona hutachiona kupenga
Tags: kuwedzera, zvinoreva, bhuku, kongiri, coronavirus, kurwara, Featured, ik, lockdown, Martin, zvinofanira, praktischer, praktische, mazano, nyika yakasununguka, Wat
Bhuku rakatengwa! Ini ndinofungidzira uye ndinovimba vazhinji vachatevera. Ini pachezvangu ndatova mukuzvidzivirira kunotyisa pandinoverenga kuti ndichavhunduka uye dzimwe nyika dzatove dzakatovhunduka. Pane dzimwe nzvimbo dzenhau ndakaverengawo mhinduro yekushoropodzwa kwezvaizotaurwa namambo manheru ano, maitiro akadai: "Nei vanhu vachiramba vachimukira kana chimwe chinhu chiri kutaurwa namambo, chingorega chiuye pamusoro pako" EUH, kwete! kufunga kwakasimba kunotenderwa!
"Mhezi Smith" mhedzisiro yazvino ino shanda zvizere nekuti vanhu vanotya zvikuru uye vanotenda zvese izvo zvematongerwo enyika, vezvenhau, nyanzvi nezvimwe vanoti (kusanganisira vanhu vaive vatomuka uye vakatoshora hurumende neMMSM kukandwa nzira yose kudzoka mumamiriro avo ekare ehope. Ivo ikozvino vatenda iyo MSM 100% zvakare uye pamusoro pezuva vakatendeuka kushoropodza kwavo muhurumende mukutenda kusingaoni kwehurumende imwechete.
Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirawo kuona kuti 99% yevanhu vakakukomberedza vanoedza kurwisa uye kukurwisa zvakanyanyisa sevanonzi "zviremera", kana vangozoona kuti hautendi rondedzero uye mukudzivirira kuda kuenda.
Ndakatozviona izvi pandakaratidza kushamisika zvishoma nezve njodzi yehutachiona hwekorona. Ndakarwiswa kwazvo nevanhu zvekuti ndaifanira "kuvhara" uye kuti ndaifanira kuona kuti hutachiona hwe corona hwaive nengozi uye kuti ndinofanira kunyara nepfungwa dzangu.
Ini zvakare ndakarwiswa zvakaoma online apo ini ndakaratidza kuti kuita kweGurukota Bruins kunogona kunge kwakacherechedzwa neakakwira ma "Holllywood" uye kuti zvimwe anogona kutevera tsoka dze "zvisina kunaka" R. Hauer. Ini ndakakurumidza kurwiswa (pamwe neIM) kuti ndaifanira kutora mazwi angu kumashure uye kuti aizozvionera kuti ndaive ani uye kwandaigara uye kuzvigadzirira kushanya kunobva kwaari neshamwari dzake. Vamwe vazhinji zvakare "zvakabvumwa" havana kundirwisa sekutyisidzira maitiro angu apo mushambadzi wedu akanaka zvikuru akafa.
Helikopta mari sekurudziro yakatorwa munyika dzakasiyana siyana ndiyo kiyi yedhijitari mari system. Vanhu vanorasikirwa nemari yavo nekuda kweiyo hutachiona hweCorona uye huwandu hwemari vanovimbiswa pavanosarudza… .., vachasarudza kugamuchira iyo mari iri pasi pemamiriro ezvinhu, saka mari yemadhijitari neye track uye yekutsvaga nzvimbo.
Michael32 akanyora kuti:
Manyepo ekuparwa kwemhosva akapusa.
MuGerman, faindi uye zvirango zvekutaurira izvo zvisingakwani mukati mehurongwa munguva pfupi:
Izvi zvakateverwa neshoko diki "rinogona kunge riri remanyepo nhau" mupepanhau renyika hombe muNetherlands, De Telegraaf (online vhezheni). Mumwe munhu (zvakataurwa zita uye kunyadziswa kuti yaive muMuslim kusimbisa isu-ivo kupokana, iwo maRuslim akaora etc) akange akasangana kumeso kwemupurisa uye sezviri pachena anotongerwa masvondo gumi mutorongo izvi. kupiwa mhosva.
Uku ndiko kufurufusha (mamiriro) ezvipenga zvemberi remutemo chaiwo umo kukwevera paruzhinji kunogona kukonzera kusungwa (izvi zvinogona kuunzwa zvachose uye zvakare kushanda pakukosora nefuruwenza, nezvimwewo).
Ehe, ndakaiverenga. Ini ndinotenda zvikuru kutumira chiratidzo: "Nechekuseka kana kana kupanduka kushoma unoenda kujeri." Zvijaire. ” Uye hongu, kushushikana kweMuslim kuri kuita zvakare zvakare. Mushure mezvose, murazvo uchakurumidza kurova pani kana nyonganiso yatanga. Ivo vanoda mhirizhonga uye ivo vanoda Hondo yevagari vemo pakati pevamiririri nevechiIslam chikamu chehuwandu (shure kwaizvozvo Erdogan achaisa zvinhu muhurongwa).
Berna B akanyora kuti:
Mhoroi! . Tinokutendai nekuda kwezvinyorwa zvese zvamunonyora uye zvinoita kuti tiwedzere kuziva Martin. Ini ndiri nhengo nyowani uye ndine mimwe mibvunzo kwauri. Chii chaunokurudzira maMuslim kuti aite mumamiriro ezvinhu aya? Iwe unofunga kuti zvombo zvichashandiswa muhondo iyi, ichava yemuviri here? Iwewo unoziva kuti inguvai yatinogona kuvharirwa muNetherlands. Mune mamwe mazwi, mukati memiganhu yeEurope? Izvi zvichavawo dambudziko kune avo vane mhuri kunze kweEurope uye saka ini handizive kuti inguva yakadii isingakwanise kuona kusanganisira ini. Izvi zvinogona zvakare kushungurudza vanhu nenguva. unofunga kuti izvi zvinogona kuitika here zhizha rino? Kana zvimwe zvakanangana 2023? Inyika ipi ichasiyiwa kunze uye vanhu vasingabirirwe? Iwe unofunga isu tinogona kumhanya kubva mukudzivirira here? Zvakare chimwe chinhu pachako. Iwe wakati iwe uri mune yekuvhara nyika. Hausati wave kukwanisa kuona kuti iwe pachako kare kana kuti hauna kutadza kuzvisiya nekuda kwezvikonzero? Hapana zano kuti icharamba yakachengeteka papi. Chitsuwa chine vanhu vashoma kana chimwe chinhu? kana nyika ichaita nyoro? ndatungamira mberi 🙂
Ndatenda. Verenga zvinyorwa kubva kumavhiki maviri apfuura uye iwe uchawana mhinduro dzemibvunzo yako. Ini ndinokurudzirawo kuverenga bhuku, nekuti iro rinoumba hwaro; uye neveMuslim.
Ini handina kubva nekuti ini ndakanga ndisina mari yemari, asiwo nekuti ndaiziva kuti hazvina basa kuti uri kupi munyika. Iyi hutachiona hwe korona chiratidzo chehurongwa hwaLuciferi (ona bhuku).
Ungave uchida kuva kupi. Pane chitsuwa chisina kuvakwa
Uye zvakare teerera kuminiti 1; 58 "akawana syringe ye anti flu"
verdo akanyora kuti:
Kutenda. Wakatoverenga bhuku rako? Handisati ndamboverenga mabhuku zvakadaro, iko zvino rinofanira kuuya
Munguva yeKanzuru yeVashandi, makurukota ari kuisa muenzaniso wakanaka nhasi: zvakapetwa.
"Teererai kune mumwe nemumwe"
"Namatira kumirairo kana zvimwe zvinhu zvichashata"
Muchokwadi, isu tatova muudzvanyiriri nekuti HAPANA chaiwo chaiwo
kupikisa kuripo. Zvekare zvakare munhu wese akanyarara, magamba pane anotsvedza.
Ini ndinoti kuna Martin nemaphosta ari pane ino saiti, iwe uri magamba chaiwo. Martin chingoramba uchienda iro ibasa rako pasi pano, rakapihwa na 'mwari' kana chero ari.
Kunyangwe ndisiri 'Mukristu' ini ndichiri kuda kutaura nezvazvo
VaEfeso 6:11 yakapfupikiswa muchidimbu kuti tinorwa nharo nenyama neropa asi nevatongi verima.
Kusarudzwa pakati pezvakanaka nezvakaipa. Vanhu vanogara vachisarudza chinhu chakaringana, kunyangwe nzira iyo ndiyo yakaoma kwazvo.
Kushaya mhosva akanyora kuti:
"Ndokumbira utarise: ichi chingangove chinyorwa changu chekupedzisira."
Zvakadaro, ndinotarisira kuti iwe unogona kubva kunze kwehusimbe hwehutachiona chaihwo. Isu tese tiri pasi pevaoni, isu tiri kuenda mukati menguva dzakaoma. Simba ngarive newe.
Tora hanya uye utende.
Martin zvinyorwa zvako nemhinduro dzicharamba dzichirira mune izvi zviyero. Hapana chinogona kuitwa nezve izvi zvekare, izvi zvinonzi budiriro. Hutachiona hwehutachiona hwakatogadzirwa, hatina kudonha nekuda kwekudzikira.
Kana vanhu vakaisa mapuzzle pamwe chete, inova isingatarisirwi kukura uye inosimuka pamusoro pechose uye munhu wese, kusanganisira vamwari vepasi rino!
Nenzira iyi tinosangana neyepakutanga baba vemifungo yedu uye tinosangana naMwari chaiye kunze kwenzvimbo ino yepasi. Hazvigone kuuya pano nekuti mafambiro ari pano akaderera. Isu chete tinogona kuratidza Mwari wechokwadi kuburikidza nechiedza chaicho, rudo uye chokwadi.
Ndokusaka nyika ino ichativenga, asi isu tinofamba pamusoro pekusuwa uye tirege kunyura pasi pemvura.
Ziva kuti ndiwe ani uye kwaunobva.
Orange pamusoro, zuva riri kumusoro. Tinobva zvakanyanya, usazvirega uchitaura pasi!
Teerera nokungwarira, mutauro wedu uye wanga uripo!
Kana vari xanders, xandernieuws inowira kure sezvandaita. Ndingataure here kuti saiti wechiKristu inogona kuva yakanaka pane kungodyara kusuwa?
Ndakanga ndatumira mhinduro yakanaka asi haisi kuzotumirwa, pamwe nekuda kwekukanganisa kwehunyanzvi
Musoro wenyaya mune jecha nhau
Isu tinofanirwa kusarudza: nyika yekare, isu tiri the prick.
kana zvapera tinomira pamusoro pekusuwa.
Ehe, Xander ichave izere nekutya
Handigone kufungidzira kuti xander nhau haisi kupikiswa inodzorwa (asi inogona kunge isiriyo) nekuti ini handigoni kufungidzira mumwe munhu akamuka kuti afunge zvisina kufanira (iri idambudziko hombe 99% yehuwandu hwevanhu uye kuti saka zvakananga mupasi) uye nhau dzakazvimirira dzinowira yeiri yepamusoro-pasi yepasi sosi yakawanda hysteria hoax.
Tichifunga nezve kusimudzirwa kwekutya kweiyo coronavirus (kodzero yezvematongerwo enyika yeNetherlands), ndinogona kungogumisa kuti Xander akaedza kutamira mukamba yangu pakutanga nhanho kuti abate nzira yevaverengi. Iye zvino anoratidza iye huso hwechokwadi.
Zvakanaka, izvo hazvifanire kutishamisa. Iyo yakawanda iyo yainoparadzira ndeyako iwe yaunoziva. Ivo vanoshandisa iyo 'Illuminati' mannequins kwekutya kuparadzira kuti vape vanhuwo zvavo kusanzwa zvakanaka. Ivo vanofarira izvo kune kwavo kuronga. Zviri kurova kuti hapana wavo, ehe, avo vane 'hutachiona' uye vanoparadzira vanofa chaizvo.
Sezviri pachena ivo havadi kushinikiza chiitiko icho kusvika kumucheto. Vanhu havawire nekuda kwehurongwa hwavo hwakaipa uye vagare vane hunhu. Kana zvagadziriswa, makomisheni echokwadi kubva kuvanhuwo zvavo achauya kuzotengeserana kwavo uye vafambe sezvakaitika kuSouth Africa. Izvi zvinogoneka kana vanhuwo zvavo vachizvida.
« Kukwirisa Insights muCoronavirus Panic naDr. Wolfgang Wodarg?
Kana iyo yakazara coronavirus yekutsvedza inouya uye kuti inoratidzika sei: bvunzo dzekunyora neuto »
Total Visits: 1.489.800
Camera 2 op David Icke London Chairo yakafemerwa vhidhiyo: iri Icke ndeye chaiyo kana kuti fake kana ichokwadi chakasanganiswa neichovha chechisimba?
Future op David Icke London Chairo yakafemerwa vhidhiyo: iri Icke ndeye chaiyo kana kuti fake kana ichokwadi chakasanganiswa neichovha chechisimba?